महान छोरी जसले आफ्नो आधा कलेजो आमाको शरीरमा प्रत्यारोपण गरेर आमालाई बचाइन् ! – Dainik Sangalo
महान छोरी जसले आफ्नो आधा कलेजो आमाको शरीरमा प्रत्यारोपण गरेर आमालाई बचाइन् !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पौष २०, २०७८ समय: १३:०८:४७
५४ वर्षीया धनमाया तामाङ छोरी ३४ वर्षीया उषालाई सुमसुम्याउँदै थिइन्। दुवै जना एकअर्कालाई हेरेर मुस्कुराउँदै थिए। घरीघरी भावुक पनि हुन्थे।
छोरीको आधा कलेजो आमाको शरीरमा प्रत्यारोपण गरेको चार दिनपछि भेट भएको हो। यसरी भेट हुँदा यी आमाछोरीमा खुसीको कुनै सीमा थिएन।
यी आमाछोरी चितवन मेडिकल कलेजको प्रत्यारोपण वार्डको सँगै जोडिएको अलग–अलग क्याबिनमा छन्। उषा आमाको अवस्थाबारे स्वास्थ्यकर्मीलाई सोधिरहन्छिन्। आफ्नो आधा कलेजो दिएर आमालाई बचाउन पाएकोमा उषाले गर्व महसुस गरेकी छन्।
धनमायाका श्रीमान् रनबहादुर अस्पतालको क्याबिनबाहिर श्रीमती र छोरीलाई पर्खेर बसेका छन्। श्रीमतीको जीवनकै आस मारेका रनबहादुर बिरामीको स्वास्थ्यमा आएको सुधारले खुसी छन्।
जीवनसंगिनी बाँचेको खुसीले उनी गद्गद् छन। ‘कसरी बचाउने भनेर आसै मारेको हो। छोरीले नै आँट गरेर बचाइन्’, रनबहादुरले भने, ‘मृत्युबाट बचेकी छन् परिवार खुसी छौं।’ उनका एक छोरा र छोरी छन्।
यूएईको दुबईमा ८ वर्षदेखि ब्युटिसियन काम गर्ने उषा आमाको उपचारको लागि माघमा घर फर्किएकी हुन। विदेशमै रहँदा उनले आमा आईसीयूमा रहेको खबर पाइन्। अब दुई महिनापछि फेरि दुबई जाने उनले बताइन्। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा अनिल ढकालले खबर लेखेका छन् ।
Last Updated on: January 4th, 2022 at 1:08 pm